लोकसेवाद्वारा वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक, के के मा भयो फेरबदल ? (तालिकासहित) - Everest Dainik - News from Nepal
लोकसेवाद्वारा वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक, के के मा भयो फेरबदल ? (तालिकासहित)
लोकसेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकामा संशोधन गरिएको छ ।
जसअन्तर्गत शाखा अधिकृतको विज्ञापन मंसिरको अन्तिम बुधबार खुल्ने छ भने नायब सुब्बाको पुस अन्तिम बुधबार खुल्ने छ ।
त्यस्तै, खरिदारको विज्ञापन फागुन महिनाको अन्तिम बुधबार खुल्ने छ । सहसचिव उपसचिवको विज्ञापन दुई महिनापछि सारिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस लोकसेवाको फाराम भर्ने क्रम जारी
बाँकी जानकारी तलको तालिकामा पढ्नुहोस्–